Living together နှင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » Living together နှင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ…
Posted by etone on Jul 15, 2010 in Buddhism | 8 comments
Living together ဆိုတဲ့ စကားကို “လက်မထပ်ဘဲ အတူနေခြင်း”လို့ အဓိပ္ပါယ်
နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ အနောက်တိုင်းမှ ဆင်းသက်လာတဲ့
အလေ့အကျင့်လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အဆိုအရ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် တစ်ဘ၀လုံး အတူလက်တွဲ သွားရမယ့်အရေးမှာ
တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်မသိဘဲ ဘုမသိဘမသိ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ထာဝရ
နေထိုင်သွားတာထက် စာရင် တရားဝင် လက်မထပ်ခင် နှစ်ဦးသဘောတူ
အတူနေထိုင်ပြီးမှ တရားဝင် လက်ထပ်တာက အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပြဿနာအဖြစ်နည်းပြီး
ရေရှည်မှာလည်း သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် လက်မထပ်ခင်
အတူနေတဲ့ living together ပုံစံကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အနောက်တိုင်းက လူအတော်များများဟာ ဒီစနစ်ကို
ကျင့်သုံးနေကြပြီး တစ်ချို့ဆို သားသမီး တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရမှ
အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ အဆိုအရ အောင်မြင်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဒီစနစ်ဟာ
အနောက်တိုင်းကနေပြီး အရှေ့တိုင်းအထိ ပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်။ ဥရောပတိုက်၊
အမေရိကတိုက်မှသည် အာရှတိုက်၊ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် အခုတော့ အရှေ့တောင်
အာရှနိုင်ငံများကိုပါ ပြန့်နှံ့လာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စနစ်
ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပေမယ့် ဒီစနစ်ဟာ အာရှတိုက် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တော့
ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ကတော့
ဒါဟာ အမတန် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ စနစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေတဲ့
စနစ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလာတဲ့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နေ့စဉ်ခါးဝတ်ပုဆိုးလို မြဲမြံနေရမယ့် ငါးပါးသီလထဲမှာ
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ သိက္ခာပုဒ်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာမဂုဏ်များမှာ
ဖော်လွဲဖောက်ပြန် ပြုကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဒီသိက္ခာပုဒ်ဟာ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာမဂုဏ်မှီဝဲတာကို ရှောင်နိုင်ရင် ကောင်းပေမယ့် မရှောင်နိုင်ရင်တော့
ကိုယ့်အိမ်သူသက်ထား၊ ကိုယ့်လင်ယောက်ျားနဲ့ပဲ မှီဝဲနေထိုင်နိုင်ကြောင်း
ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည် မှန်သမျှ ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာ
ကိုယ့်လင်ယောကျာ်း၊ ကိုယ့်ဇနီးမယားကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာကိုမှ
ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မဖောက်ပြန်ရဘူးလို့ တားမြစ်ထားခြင်း
ဒီကာမေသုမိစ္ဆာစာရ သိက္ခာပုဒ်ဟာ အိမ်ထောင်သည်များကို ရည်ညွန်းပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားများအတွက် ပိုပြီးတားဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်များအတွက် ကာမေသုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသွားလာအပ်တဲ့ မိန်းမ
(၂၀)ရှိကြောင်း ပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာမှာ ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ ၂၀က
(၁၆) ခေါင်းရွက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ မိန်းမကို ခေါင်းမရွက်စေဘဲ
ကာမပိုင်မရှိတဲ့ ပထမ မိန်းမရှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ခြားယောင်္ကျားနဲ့ ဆက်ဆံမှု
ပြုပေမယ့် သူ့ကာမကို သူသာပိုင်တဲ့အတွက် ကာမေသုမိစ္ဆာ မထိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့
ယောင်္ကျားမှာတော့ အဂမနီယ ဖြစ်တဲ့မိန်းမကို ကျူးလွန်တဲ့အတွက် ကာမေသုမိစ္ဆာရ
ထိုက်ပါတယ်။ ကာမပိုင်ရှိတဲ့ မိန်းမ(၁၂)ယောက်က ကာမပိုင်မှတစ်ပါး
တစ်ခြားယောင်္ကျားနဲ့ ကျူးလွန်မိရင်ကာမေသု ထိုက်သလို ကျူးလွန်တဲ့
ယောင်္ကျားမှာလည်း ထိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုသွားလာရာမှာ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ
ထိုက်တဲ့အင်္ဂါ ရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှ ထိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့
ဒီအင်္ဂါလေးချက်နဲ့ ညီရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ထိုက်ပြီး၊ လေးပါးအနက်က
တစ်ပါးပါးချွတ်ယွင်းနေတယ် ဆိုရင်တော့ မထိုက်ပါဘူး။ ဒါက စာပေမှာလာတဲ့
ကာမေသု မိစ္ဆာစာရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖွင့်တွေအရ ပြည်ပကိုရောက်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့
တစ်ယောက် အဆင်ပြေစေဖို့ living together သဘောနဲ့ နေနေကြသူများ
အထူးသတိပြုသင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေရော မိန်ကလေးတွေရော
အတူတူ နေကြရာမှာ အထက်ပါ ကာမေသုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို
သတိပြုကြဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ချို့ အိမ်ထောင်ကျပြီး တရားဝင် ကာမပိုင်ရှိတဲ့
ယောက်ျားများ၊ မိန်းမများဟာ ပြည်ပရောက်ပြီး မသိမသာ အတူတူ နေနေကြတာတွေ
ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ယောက်ျားက တရားဝင် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကာမပိုင်
ရှိသလို၊ တစ်ခါတစ်လေ မိန်းကလေးကလည်း တရားဝင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ကာမပိုင်
ရှိနေတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံး
ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ living together ဟာ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ လွတ်မလွတ်
ပြီးတော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမိမြန်မာပြည်ကနေ
အပြင်ရောက်နေတဲ့သူ အတော်များများဟာ ပြည်ပကို ရောက်သွားတာနဲ့
တစ်ပြိုင်တည်း အကုန်လုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကို နေပစ်လိုက်တာတွေ
တွေ့မြင်ကြားသိနေရပါတယ်။ တစ်ချို့က ပြည်ပမှာ ရပ်တည်ရေး အဆင်မပြေတာ၊
ပြေပေမယ့်လည်း ကိုယ်ကျင့်သီလပိုင်းကို ဂရုမစိုက်လိုတာ၊ အနောက်တိုင်း
စနစ်ကို အတုယူ အားကျနေတာ စတာတွေကြောင့် ကာမပိုင်ရှိသူတွေရော၊
မရှိသူတွေပါ၊ မိဘညီအစ်ကို မောင်နှမစတဲ့ အုပ်ထိန်းသူရှိသူတွေရော
မရှိသူတွေပါ living together အဖြစ်နဲ့ နေနေကြတာ ကြားသိရပြန်ပါတယ်။ ဒီလို
အတူနေတာတွေဟာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ အင်္ဂါတွေနဲ့ ငြိမငြိ၊ ကာမေသုကံ မြောက်မမြောက်
သတိပြု ဆင်ခြင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ကာမဂုဏ်ကိစ္စကို အလေးပေးလေ့ မရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သဘောအရ
ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်မထပ်ဘဲ အတူနေတဲ့ အလေ့ဟာ
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်စေဖို့ အကြောင်းအတော်များတယ် ဆိုတာ သတိပြုဖို့
လိုပါတယ်။ ဖြစ်ဖို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးသူများ
အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ယောက်ျားသားများ အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး
ကိုယ့်ဇနီးနဲ့ အတူကာမဂုဏ် မှီဝဲမှုဟာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကံမဖြစ်ပေမယ့်
တစ်ခြားအမျိုးသမီး တစ်ဦးဦးနဲ့ သွားလာပျော်ပါးမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး
ဖောက်ပြန်မှု ဖြစ်တဲ့အပြင် ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင်သဘောအရ ကိုယ်လုပ်ကျွေးနိုင်လို့ ဇနီးအများကြီး ယူထားတယ်ဆိုရင်တော့
ဒါဟာ ကံမမြောက်ပြန်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ သဘောတွေနဲ့ဆို ဘယ်လိုမှ ကာမေသုကံ
မလွတ်နိုင်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
ကိုယ့်လင်ယောက်ျားကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ယောက်ျား တစ်ယောက်ယောက်နဲ့
ကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်တာ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကံ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ယနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ living together စနစ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်အရ
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက လက်မထပ်ဘဲ အတူနေကြတာတွေဟာ အနောက်တိုင်းသားများရဲ့ သဘောအရ
ရေရှည်အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပေမယ့်
ဗုဒ္ဓဘာသာ သဘောအရ ဒါဟာ အကုသိုလ်အပြစ်ဖြစ်တဲ့ ကာမေသုမိစ္ဆာ စာရကံ
ဖြစ်စရာအကြောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့
လက်မထပ်ခင် ဘယ်လောက်ပဲ အတူတူနေပြီး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေအောင်
ကြိုးစားကြပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်ထပ်တဲ့ အခါကျတော့လည်း အိမ်ထောင်ရေး
အဆင်မပြေတာတွေက အများကြီးပါပဲ။ အဓိကကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့
ကိုယ့်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ထိမ်းသိမ်းရေးက အဓိကကျပါတယ်။
ခုမှတွေ့ကြပေမယ့်လည်း တော်တဲ့သူက တော်နေမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကျင့်တရား
ကောင်းသူက ကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတော်ကောင်းဟာ သူတော်ကောင်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် လွတ်လပ်မှုနဲ့အတူ အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံနည်းပါးကာ ဘာသာတရား
အဆုံးအမများ အပေါ် အလေးထားလေ့ မရှိကြတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာများအနေနဲ့
သူများယောင်လို့ ယောင်၊ အမှောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိ မဖြစ်ရလေအောင်
သူများ living togetherဆိုပြီး ကိုယ်ကပါ လိုက်ပြီး living together
မလုပ်မိကြဖို့၊ ခဏတာ အပျော်၊ ခဏတာ အဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ ဘ၀သံသရာ
ဒုက္ခဖြစ်စေမယ့် မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာ လိုက်ပြီး မလုပ်မိကြဖို့
အထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတာ သတိပြုကြရင်း living togetherနဲ့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကို
သေချာစဉ်းစား ဆင်ခြင်ကာ အတူနေရာမှ ကာမေသုအဖြစ် မရောက်မိကြစေဖို့
စေတနာစကားနဲ့ အသိပေးပြောကြား လိုက်ရပါကြောင်း…
စာရေးသူ = အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပဒါယီ) ။ အချိန် 1:07 PM
Thank you for this post. The list seems exaggerated as the bottom 12 are controversial according to the modern day standard. In addition, I don’t think this detailed list correctly reflect the original text and might be overstated by Hinduism. If we study Buddhism in depth, it does not closely intervene the layman’s world as everything follows the cause-effect law. Buddha did not address the severity of punishments given to criminals at that time because, I think, the truth today can be opposite tomorrow.
မသိသေးသူများ သိစေဖို့ရန် ပြည့်စုံအောင် စုစည်းထားတဲ့ အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော စာသားများဖြစ်ပါတယ်
ဒီအသိတွေ လူတိုင်းရှိကြဖို့ လိုပါတယ်
် တိရိစ္ဆာန်ကလဲ တိရိစ္ဆာန်လိုနေပါတယ်။
ကိုယ်ဘယ်ထဲကို ပါချင်သလဲဆိုတာ မှန်ကြည့်ပြီး ပြန်မေးရအောင်နော်။
လူနေမှု့စနစ်ကို ..လေ့လာပါ …. တို့နိုင်ငံ မှာ တို့ဥပဒေ ရှိရင်…. အဲဒါတွေ မလိုအပ်ပါဘူး.. အဓိက ကတော့… လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ပါပဲ…. လူချင်းတူတယ်.. စိတ်ချင်း..ခြားနားပါတယ် …..လေ့လာသင့်တာ..ယူပြီးရင်.မလိုအပ်တာ.. လွှင့်ပစ်ရမှာပါ …
I am sure the author means very well and author has good intentions. It appears that the author is well rounded in Buddhist literatures. From the name, I am assuming that the author isaBurmese Buddhist monk. I can tell that the author is expressing his opinion. His only reference is Myanmar Buddhist literature.
I do not believe that the author has personal experience in living together withagirl before. Most likely, the author does not hold any real job to make his own living. It does not appear that the author have real world understanding of the issue. He just expresses his conservative views and religious-based literature.
I do not consider the author qualified as an expert in this subject matter. I would listen seriously to someone who has lived together without marriage. Only then, we will hear serious discussion points based on real-life experience.